‘स्मार्ट होम’: अफिसबाट मोटर चलाउँदा घरको ट्यांकीमा पानी भरिन्छ !  HamroKatha
‘स्मार्ट होम’: अफिसबाट मोटर चलाउँदा घरको ट्यांकीमा पानी भरिन्छ !
“कनेक्ट होम” यहि हप्ता क्यान इन्फोटेकबाट लन्च भएको हो । तर चारवटा घरमा भने उट्घाटनभन्दा पहिले नै जडाई भई सक्यो I उहाँहरूको प्रतिक्रिया उत्साहजनक छ ।
हाम्रो कथा २०७५ माघ १७ गते १८:२१
मानौँ कि घरको तेश्रो तला माथि रहेको भान्सा कोठाको बत्ति निभाउन बिर्सिएछ I अहिले हामी अफिस जानको लागी घरको गेटसम्म आई पुगिसक्यौं I अब बल्ल माथि कुनै पनि विद्युतीय उपकरण चलिरहेको छ भने याद आयो। तब; हामीले घरको पहिलो तलाबाट नै त्यस उपकरणको स्वीच बन्द गर्न सकिन्छ ।
अटोमेसनबाट आफ्नो सुबिधा अनुरुपको ठाउँबाट आफ्नो घरका काम गर्न सकिन्छ I अर्को व्यवहारीक उदारहणबाट बुझौँ अफिसबाट घर जाने बेला भयो, घरमा पानीको मोटर अन गर्दिनु पर्ने छ I अफिसबाट नै मोटर चलाई दिन सकिन्छ र घर पुग्दा ट्यांकीमा पानी भरिएको हुन्छ I कसरी नेपालीको व्यस्त सहरी जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ I
यो प्रोडक्टको प्रयोग के भन्दा, भोइस कन्ट्रोल (आफ्नो स्वर) बाट होस् या तपाईको फोनबाट होस्, घरको कुनै पनि स्विचलाई अटोमेट (स्वचालन) गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रोडक्ट “कनेक्ट होम” हो । यो एउटा होम अटोमेसिन सोलुसन (गृह स्वचालन प्रविधि) हो ।
“कनेक्ट होम” का संचालक आलोक सुबेदी बताउनुहुन्छ, “यो काम एकदम सुलभ र सस्तो तरिकाले वितरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्यन गर्ने क्रममा यस्तो प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सक्यौं। यो अहिले सम्मको नेपाली बजार उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो र मान्छेहरूले खरीद गर्न सक्ने सेवा-सुविधा हो I ३० हजार देखि ३५ हजार नियूनतम मूल्यबाट यो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । जुन भनेको चार जनाको एउटा सानो परिवारको घरलाई समस्तले अटोमेट (स्वचालन) गर्न सकिन्छ।
तस्वीरमा: आलोक सुबेदी
करीब १ वर्ष अघिसम्म आलोक सुबेदी आफू पनि अमेरिका स्थिथित “सिलिकन भ्याली” मा काम गर्थे I यसको केन्द्रिय कार्यालय “सिलिकन भ्याली” मै खोले । नेपालमा बल्ल आएर काम सुरु गर्दै छन् । यहाँ आएर हेर्दा यस किसिमको प्रोडक्टको आवश्यकता देखे । किन भने यस्तो खालको सेवाहरू पर्याप्त मात्रामा छन् तर त्यसको खरिद क्षमता भने औसत नेपालीमा नभएको, यसर्थमा त्यो उत्पादन एकदमै महँगो रहेछ ।
सबैभन्दा गाह्रो के हुन्छ भने एउटा घर बनाइसकेपछि घरमा राखिसकेको समानहरू कति दु:ख गरेर जडान गरेको हुन्छ I कति पैसा खर्च गरेर राखेको हुन्छ । अब; अटोमेसन गर्नु पर्‍यो भने त्यो सामानलाई निकालेर फेरि नयाँ सामान राख्नु पर्ने हुन्छ । यसमा दोब्बर खर्च हुने भयो । यसमा अध्यन गर्दा-गर्दै यो सोलुसन आएको हो । यो अटोमेसन सिस्टम नेपाल मै बनाएका हो । सफ्टवेयर देखि लिएर हार्डवेयर दुबै नेपाली परिवेश सान्दर्भिक छ I हर्डवेयर चाइनामा बन्छ तर नेपालको आवश्यकता अनुरुप डिजाइन गरेर चीनबाट अर्डर गर्ने भएकोले समस्या आउदैन । अनि त्यसलाई यहाँ लिएर आएर अझ कस्टम गरिन्छ, नेपाली घरको आवश्यकता र जडानको परिस्थिति अनुरुप ।
आलोक थप भन्नुहुन्छ, “ नेपालको कुनै पनि घरकको स्विच, पुरानो स्विचेजहरू चेन्ज गर्नु पर्दैन । जडान गरेको स्विचलाई नै हामीले अटो मेट गर्दिन्छौ।”
कनेक्ट होमको अवस्यता हाम्रो समुदायलाई कत्तिको आवश्यकता छ
आलोकका अनुसार, “लाभ लिन सक्ने हिसाबले उमेरले ५० नाघेकाहरूलाई निकै उपयोगी हुन्छ। हिड-डुल गर्न सक्ने समताको हिसाबले उहाँहरु अलिकति पाको उमेर भएका कारण यसको बढी अथवा प्रत्यक्ष रूपको आवश्यकता अग्रज समुहमा देखिन्छ । सँगै यसको प्रयोग लाई हामीले एकदमै सजिलो बनाएका छौ I जसले गर्दा बच्चा या जो कोहिले पनि सजिलै यसलाई चलाउन सक्छन् । अहिलेको पुस्तालाई हेर्नु हो भने अहिलेका केटाकेटी प्रविधिको विषयमा एकदमै छिटो र रुचीमा साथ नयाँ कुरा सकिन सक्ने भई सके I”
यस सेन्सरद्वारा चल्ने प्रविधिको प्रत्यक्ष फाईदा के-कस्ता छन् ?
“कनेक्ट होम”को मध्यमबाट हामीले आफ्नो घरको सुरक्षा सेवा ‘सेक्युरिटी’ राम्रो बनाउन सक्छौं । सेन्सरहरू जडान गर्न सकिन्छ I साईरन, अलार्महरू सकिन्छ I क्यामेरासहरुलाई पनि संगै ल्याएर जोड्न सकिन्छ ।
हामीले आफ्नो घरमा जे-जति पनि उपकरणहरु जोड्छौ, तिनको पावर मनिटरिङ्ग (पावर खपदको निगरानी) गरेर आफ्नो ‘एप ‘ मा डाटाको रेकोर्ड दिई राखेको हुन्छ। कति खेर कति पावर खपत भईरहेको छ भन्ने कुराबारे सम्पूर्ण विवरण हामीलाई प्राप्त हुन्छ I कुनै पनि एउटा वल्वले होस् या चार्जरले किन नहोस्, जुनसुकै उपकरणको डाटा दिई सकेपछी त्यसलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सहज हुने भयो।
विन्डो सिस्टम देखि डोर सिस्टम सबै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ I संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर आफ्नो घर या अफिसको हेरचाह आफ्नो हातले गर्न सकिन्छ ।
विद्युत खपतको हिसाबले यो कत्तिको सुलभ छ?
आलोक सुबेदी बुझाउनु हुन्छ, “बिद्युत खपतको हिसाबले जति अहिले हाम्रो घरमा प्रयोग भई रहेको छ,त्यति नै हुने हो । त्यो भन्दा धेरै हुँदै न । किनकि हामी अर्को नयाँ डिभाइस ल्याएर जोड्ने होइन । हामीले घरमा गएकै डिभाइसमा थप कुरा राख्दिँदै छौँ I जसले समस्त विवरण ‘एनालेटिक्स’ पनि दिन्छ I
आउँदो दिनहरुमा “कनेक्ट होम” को सम्भावना कस्तो देखिन्छ ?
“कनेक्ट होम” यहि हप्ताको मंगलबार क्यान इन्फोटेकबाट लन्च भएको हो । तर चारवटा घरमा भने उट्घाटनभन्दा पहिले नै जडाई भई सक्यो I उहाँहरूको प्रतिक्रिया उत्साहजनक छ ।
आलोक सुबेदी बताउनुहुन्छ, “सबैभन्दा खर्च र समय चाहिँ सेकुरिटी सिस्टममा लगाएका छौँ । किन भने सबैलाई आफ्नो घरको सुरक्षाको कुराबारे चिन्ता हुन्छ । ठुलो घर र अफिसको लागि उपयोगिता धेरै छ। स्कोपको कुरा गर्दा चाहिँ नेपालमा होम अटोमेसनको लागत एकदमै धेरै हुने भएकाले धनाढ्य मान्छेको लागि मात्र भन्ने एउटा जुन सोच छ नि त्यसलाई नै हामी ब्रेक गर्दै छौ । त्यो भएको भएर यसको स्कोप एकदमै राम्रो देख्छु।”
होम अटोमेसनले स्थापित हुन सके, नेपालको प्रविधि क्षेत्रले कस्तो फड्को मार्न सक्छ?
होम अटोमेसनले प्रविधि क्षेत्रमा पक्कै पनि नयाँ फड्को मर्छ। आलोक टेक्नोलोगी बारे बुझाउदै भन्नुहुन्छ, “किन भने टेक्नोलोजी भनेको नयाँ कुरा आविष्कार गर्‍या जस्तो हैन। मेरो बुझाइ चाहिँ; टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो जीवनलाई सहज र सरल बनाउने चिज हो । पहिला परेवाबाट चिठी पाठाउथे तर अहिले फेसबुकबाटै पठाउँछौ। त्यहाँ उद्देश्य
त फेरिएको छैन नि । त्यसैले, नयाँ आविष्कार भन्दा पनि प्रविधिको सही प्रयोग गरेर कसरी जीवनलाई सहज र सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पनाबाट आएको प्रोडक्ट भएका कारण सबैलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ ।”
तस्वीर: Mansion Global
२१ मिनेट अगाडि ५८ सेकेन्डमा पढिने
द ब्याडेष्ट म्यान अन द प्लानेट
२ दिन अगाडि ४ मिनेटमा पढिने